Fampiofanana matanjaka - Ireo lakilena hahomby kokoa | Nutri Diet
Ny fampifangaroana ny kardio amin'ny fiofanana matanjaka dia tsiambaratelo ho an'ny vatana salama sy voafaritra kokoa, saingy Inona no torohevitr'ireo manam-pahaizana momba ny fanararaotana bebe kokoa amin'ny fotoana lanintsika amin'ny fampiakarana lanja?
Ny fihetsika dia zava-dehibe kokoa noho ny isan'ny famerimberenana ary na ny lanjany aza alaina. Mba hiantohana fa eo amin'ny fihetsika marina ianao dia diniho ny mijoro eo alohan'ny fitaratra mandritra ny fanazaran-tena ataonao.
Ilaina ny fampiofanana tsy tapaka mba hahatratrarana vokatra azo ekena. Ny zavatra tsara indrindra dia ny manao fivoriana telo isan-kerinandro farafahakeliny eo anelanelan'ny 40 minitra sy 1 ora, ary ireo dia miovaova sy mandanjalanja. Mba hanamafisana ny fotony dia mila miasa amin'ny lamosina mitovy amin'ny abs ianao.
Raha te-hihary fotoana ianao raha mampitombo ny kaloria may, mitsambikina miasa vondrona hozatra roa mifanohitra amin'ny fotoana iray. Ohatra, ampiasao amin'ny bisikilety ny bisikiletanao rehefa manao squats ianao. Fetsy iray hafa ny mifamadika amin'ny fanazaran-tena iray mankany amin'ny iray hafa haingana ary tsy miala sasatra.
Aza ferana amin'ny dumbbells ny tenanao, satria mety hiteraka fahasosorana. Mandrosoa ary hijery ireo sisa tavela amin'ny fitaovana ampiasain'ny gym ho an'ny mpikamban'izy ireo amin'ny fiofanana ho matanjaka, toy ny tarika fanoherana, kettlebells na baomba fitsaboana.
Tsarovy izany fampihetseham-batana (izay ampiasana ny lanjan'ny vatana ihany) manome vokatra tsara kokoa amin'ny fandoroana kaloria mihoatra ny dumbbells. Ny tena mandaitra dia ny fampihetseham-batana miasa ny vatana iray manontolo amin'ny fotoana iray, toy ny fanindriana.
Tadidio izany tsy maintsy mahatsapa havizanana amin'ny hozatra ianao rehefa vitanao ny fampiharana azy. Mba hahatratrarana izany dia aza misalasala mitazona lanja roa na telo amin'ny habe samihafa mba hahafahana manampy lanja bebe kokoa isaky ny andiany ary milalao haingana (mampiakatra sy midina miadana kokoa), ary koa mampitombo ny isan'ny famerimberenana voalaza ao ny programa ataonao raha ilaina. ilaina.
Ny mariky ny fialantsasatra andro dia tsy mariky ny fahalemena, fa ny faharanitan-tsaina. Ary izany no tsiambaratelo ho an'ny hozatra ho sitrana sy hatanjaka. Ohatra, raha manao sandry ianao amin'ny Alatsinainy, dia miasa ny tongotrao amin'ny talata.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » Ahoana ny fomba hialana bebe kokoa amin'ny fampiofanana mahery
Dite maitso sa dite mainty - Iza amin'ireo no hofidiana?